राजधानीमा छ्यापछ्याप्ती नक्कली नोट ! कसरी चिन्ने सक्कली र नक्कली ?
फागुन १७, २०७४ पत्रपत्रिका
काठमाडौं: दुई युवा गत शनिबार औषधि खरिद गर्न बल्खुस्थित कार्की फार्मेसीमा पुगे । उनीहरुले औषधि खरिद गरेपछि पसलेलाई पाँच सय रुपैयाँ दिए। औषधि विक्रेकतालाई पाँच सयको नोट देखेर शंका लाग्यो। उनले तत्कालै प्रहरीमा खबर गरे । कालिमाटी वृत्तको प्रहरीले औषधि खरिद गर्ने धनुषाका धीरजबहादुर ठकुरी र भोजपुर खावाका निगम राईलाई पक्राउ गर्‍यो। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा सुवास गोतामेले लेखेका छन्।
महानगरीय प्रहरी वृत्त कालिमाटीमा लगेर उनीहरुलाई केरकार गरेपछि नोट दिने एमएस मोटरसाइकल ग्यारेजका सञ्चालक मनोज केसीको नाम पोले । प्रहरीले केसीलाई सोमबार एकथान पाँच सयको जाली नोटसहित पक्राउ गर्‍यो । केसीले सोलु तिम्ला घर भई कपन बस्ने भेषकुमार थापामगरको नाम पोले । थापामगरले अन्य दुई युवाको नाम पोले । रामेछाप नागदहका नेमा तामाङ र ललितपुर ताल्छिखेलका आशीष माझीबाट आफूले जाली नोट लिएको थापामगरले बताएपछि प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरे।
थापामगरबाट प्रहरीले पाँच सय रुपैयाँ दरको २१ थान जाली नोट बरामद गर्‍यो । तामाङ र माझीबाट भने प्रहरीले एक हजार दरको दुई थान नोट बरामद गर्‍यो । प्रहरीसँगको बयानमा तामाङले वीरगन्जबाट उक्त नोट राजधानी ल्याएको बयान प्रहरीमा दिएका छन् । महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुका अनुसार पक्राउमध्ये थापा नेपाली सेनाको जवान हुन् भने तामाङ नेपाल प्रहरीकै पूर्वजवान हुन् । तामाङ यसअघि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा कार्यरत रहँदा जाली नोटसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने पिलरमा काम गर्दै आएका थिए ।
प्रकाशित : बिहिबार, फागुन १७, २०७४१०:०९
‘देउवाले त्यसो भनेपछि मेरो बोली नै फुटेन’